Ukwazi ukuba awukwazi nto
Ukungazi ngokungazenzisiyo kuthethwa, ngokukhawuleza, kwinto yolwazi-ukuvuma komntu ngokungaqinisekiyo oko bangayaziyo. Yifakwe kwisitatimende esaziwayo: "Ndiyazi into enye-engayazi nto." Ngokudakisayo, ukungazi ngokungazenzisiyo kukwabizwa ngokuba "ubulumko bukaThixo."
Ukungaqondwa kweSologi kwiintetho zePlato
Olu hlobo lokuthobeka ngokuphathelele kulowo owaziyo luhambelana nomfilosofi ongumGrike uSocrates (469-399 BCE) kuba ubonakaliswa ekuboniseni kwiintetho zeengxoxo zePlato.
Ingxelo ecacileyo yileyo i- Apology , intetho uSocrates yanikela ngokukhusela kwakhe xa etshutshiswa ngenxa yokonakalisa ulutsha kunye nokuziphatha okubi. USocrates uxela indlela umngane wakhe uChaerephon wachazwa ngayo yi-Delphic oracle ukuba akukho mntu unobulumko ngaphezu kukaSocrates. USocrates wayengenakunqwenela ekubeni engazange azibulumko. Ngoko wabeka ukuzama ukufumana umntu onobulumko ngaphezu kwakhe. Wafumana abantu abaninzi abanolwazi malunga nemicimbi ethile efana nendlela yokwenza izicathulo, okanye indlela yokuqhuba umkhombe. Kodwa waqaphela ukuba aba bantu babecinga ukuba bafana neengcali ezifanayo nangeminye imiba nangona babecacile. Ekugqibeleni wagqiba isigqibo sokuba ngenye indlela, ubulumko kunabanye ngokuthi wayengacingi ukuba uyazi into engazange aziyo. Ngamafutshane, wayeyazi ngokungazi kwakhe.
Kwezinye iindibano zeengxoxo zePlato, uSocrates uboniswa ejongene nomntu ocinga ukuba baqonda into kodwa ngubani, xa ebuzwa ngokugqithiseleyo malunga nalo, akayi kuqonda konke.
USocrates, ngokuchaseneyo, uyavuma ukususela ekuqaleni ukuba akayazi impendulo kuyo nayiphi na umbuzo okhoyo.
Kwi- Euthyphro , umzekelo, u-Euthyphro uceliwe ukuba achaze ukuhlonela uThixo. Uzama iinzame ezinhlanu, kodwa uSocrates uhlahlela ngamnye. I-Euthyphro, nangona kunjalo, ayivumeli ukuba uyazi njengoSocrates; Uvele nje ekhwela ekupheleni kwencoko yababini njengomvundla omhlophe ku-Alice kwiWonderland, eshiya uSocrates engakwazi ukuchaza ukuhlonela uThixo (nangona sele ezama ukuzama ukuziphatha kakubi).
KwiMeno , uSocrates ubuzwa nguMeno ukuba ubuhle buyakwazi ukufundiswa kwaye buphendule ngokuthi akazi ngenxa yokuba engazi ukuba ubuhle buni. I-Meno iyamangalisa, kodwa ndaphendula ukuba ayikwazi ukuchaza ixesha eliyanelisayo. Emva kwemizamo emithathu ehlulekayo, ukhononda ukuba uSocrates uye waba neengcinga zakhe, kunokuba yi-numingra numbs. Wayekwazi ukuthetha ngokucacileyo ngobubele, kwaye ngoku akakwazi ukuthetha oko. Kodwa kwingxenye elandelayo yencoko yababini, uSocrates ubonisa indlela yokucima ingcamango yomntu ngeengcamango zobuxoki, nangona ishiya enye kwisimo sokungazi ngokuzimela, yinyathelo elixabisekileyo kwaye liyimfuneko ukuba umntu afunde nantoni na. Wenza oku ngokubonisa indlela inkwenkwe inokuthi isombulule kuphela ingxaki yeemathematika xa iqaphele ukuba iinkolelo ezingenakunyani ayenayo ngaphambili.
Ukubaluleka kobuNkokeli beSolomon
Le ngqungquthela e- Meno igxininisa ukubaluleka kobufihlakele bezobufihlakeleyo. Ifilosofi yeNtshona kunye nesayensi kuphela xa abantu beqala ukubuza imibuzo ngokuyinkolelo ukunceda iinkolelo. Indlela efanelekileyo yokwenza oku kukuqalisa ngeso simo sengqondo sokungathembeki, ukucinga ukuba umntu akaqinisekanga nantoni na. Le ndlela yayidlulileyo yamukelwa yi-Descartes (1596-1651) kwiiM meditations.
Enyanisweni, kungangqinisiseki ukuba kunokwenzeka njani ukuba kugcinwe isimo sengqondo sokungazi kakuhle kwizinto zonke. Ngokuqinisekileyo, uSocrates kwi- Apology ayilondolozi le ndawo ngokuqhubekayo. Uthi, umzekelo, ukuba uqiniseke ngokuqinisekileyo ukuba akukho nzakalo eyona nto inokukuhlaselwa ngumntu olungileyo. Yaye uyaqiniseka ukuba "ubomi obungaxhamliyo abufanelekile ukuba baphile."
I-Salute yaseRoma ibingelela uMorituri
Ukuqonda amaLungelo kunye noxanduva lwabaphathi beGreen Card
Iipolishi zaseMzantsi Carolina eziphezulu
Iphepha le-Z-Scores Worksheet
IsiTekisi IsiGama sokuTyhila
Yenza Uninzi Lwemihla KaMeyi